मिस्कलले बनाएको यौन जोडी, अन्तिममा रहेछ साथीको श्रीमती
कुरो आज भन्दा ५ बर्ष अगाडी २०६८ सालको हो। म काठमान्डौमा गैर-सरकारी निकायमा जागीर गर्थें। एक दिन फोन आफ्नो अफिसमा छोडेर हाकिमकोमा गएको थिएँ फर्कँदा एउटा नचिनेको तर पोस्टपेड नम्बरबाट मिसकल आएको रहेछ। सामान्यतया मैले त्यस्तो कलहरूलाई वास्ता गर्ने थिईन। तर त्यसदिन त्यो नम्बरमा फलोअप कल गरेँ। एकजना महिलाले बुटवलबाट गरेकी रहिछिन। झुक्कियर तथा लास्टको अंक फरक परेर तँपाई नम्बरमा गयो – त्यसकारण माफ पाउँ सर भनेर भनिन निज महिलाले। मैलेपनि त्यस्तो केही छैन भन्दै कुरो लम्ब्याउन प्रयास गरें अनि निजको बारेमा अन्य जानकारीहरू लिनको लागि विविध प्रश्नहरू तेर्साउने काम गरें। अनि कुरो अगाडी बढदै गयो साथै एक हप्ता सम्म एस एम एस तथा कुराकानीको माध्यमव्दारा हाम्रो संवाद चल्यो। यसै बिचमा निजले आफ्नो ईमेलबाट एउटा फोटोपनि पठाईन – नानी मोटी मोटी क्यूट अनुहार परेकी रहिछिन।
साथै निजले भने अनुसार अंग्रेजी साहित्यमा एम ए पास गरेको तथा कलेजमा पार्टटाईम अंग्रेजी विषयपनि पढाउने गरेकी रहिछिन। यसै बिचमा मैले उसको श्रीमान, छोरा – छोरी तथा घर माईतीको बारेमा सबै जानकारी लिईसकेको थिएँ। हाम्रो फोन मार्फत सबै तथा अन्तरंग वातचित पनि भईसकेको थियो। तर खाली भेटघाटमात्र हुनसकेको थिएन। भेट हुने बित्तिकै एकआपस माया साटासाट गर्ने समेत सहमति भईसकेको थियो। म बुटवल पहिलेपनि बसिसकेको हुनाले केही नौलो थिएन। यसै बिच बुटवलका केही साथीहरूले मलाई हाम्रो सामाजीक संस्थाको बैठक बुटवलमा राखेको कुरा जानकारी गराए अनि मैलेपनि उनलाई सो को जानकारी गराएँ। तर तिथिमिति निश्चित भएपछि खबर गर्छु भनेँँ। करीब ७-८ महिनाको फोनमा बसेको माया प्रीतिलाई साकाररूप दिन पाउँदा हामी दुवै अत्यन्त खुशी थियौं। यसै बिच २०६८ मार्ग ९ गते बैठक गर्ने तय भयो अनि मैले ३-४ दिन अगाडि देखि जानकारी गराउने प्रयत्न गरें तर सम्पर्क हुन सकेन कारण निजको श्रीमान सुदुर पश्चिमबाट जागीरमा केहीदिन बिदा लिएर आउनु भएको रहेछ। त्यो कुरा पछि थाहा भयो। अनि २०६८ मार्ग ८ गते म निरास हुँदै नारायणघाटबाट बैठकमा सहभागि हुने एकजना भाईलाई साथमै लैजाने उदेश्यले चितवनसम्मको टिकट लिएर माईक्रो बस चढेँ। विच बाटो मुग्लिङ – मनकामनाको बिचतीर तिनको फोन आयो – अनि मैले तुरून्तै भने "म बुटवल आउँदैछु" उताबाट प्रत्युत्तर आयो "म नारायणघाट आफ्नो घर आउँदैछु"। कहिले फर्कने भनि सोध्दा "आजै" भन्ने जवाफ आयो। त्यसो भए पहिला भेटौं भन्ने सहमति भयो र हाम्रो भेटपनि भयो। नारायणघाटमा खाजा खानेकाम भयो।
अनि त्यसपछि त्यही भाईको सहयोगमा उसलाई भोलि विहान आउनु भनेर साँझको गाडीमा हामी दुई बुटवल तर्फ लाग्यौं। आहो कति रमाईलो भयो त्यो साँढे दुई घन्टाको यात्रा – खाली फोनमा मात्र कुरा गर्न पाएका हामी प्रत्यक्ष भेट अनि सँगैको यात्रा मिल्ने सम्मको मजा लुटदै गयौं। अब रातीको बसाई कहाँ हुने भन्ने म मा अलिकति चिन्ता थियो। उनले भनिन मेरो श्रीमान हिजो आफ्नो कार्यस्थल तर्फ गईसक्नुभयो, छोरा एस एल सि को तयारीकोलागि होस्टलमा बस्छ, छोरी अलि सानी छे – उसलाई सुतायपछि रात हाम्रै हो त्यसकारण मेरै फ्लाटमा बसौं भनिन्। मलाईपनि के खोज्छस काना आँखा भने जस्तो भयो। बसबाट हामी राजमार्ग चौराहामा झर्‍यौं – अनि मलाई कन्डोम किनेर ल्याउनुस भनिन – मैलेपनि सोहि बमोजिम गरेर हामी एउटै रिक्सामा उनको कोठमा गयौं। छोरीमात्रै बसेकी रहीछिन – अनि उनले आफू बुटवल आईपुगेको कुरो आफ्नो श्रीमान र छोरालाई फोन मार्फत गराईन।
छोरीलाई छिमेकीले खाना खुवाएर राखिसकेकी रहेछन। तर आफ्नो मनमा भने छिटो भन्दा छिटो एक चोटी सहवास गरिहाल्न पाए हुन्थ्यो – तर उनले खाना खाएपछि भनिन्। उनले हाम्रोलागी खाना बनाएर खाएपछि उनको बुडाबुडीकै बेडमा सुत्ने भयौं। छोरीलाई अर्को कोठामा सुताएर आईन। त्यसपश्चात केही समय हामीले सम्भोग अगाडी गरिने क्रियाकलापहरू चुप्पा खाने, जिब्रो चलाउने, दुध माडने, दुध चुस्ने साथै उनको पुतीमा औंला हालेर चलाउने सम्मको हर्कत गर्‍यौं। सार्‍है आनन्द आईरहको थियो दुवैजनालाई। अनि मैले अब गरौं भनेर सोधेको त उनले "किन ढिलो गरेको यतिन्जेल" त भनेको पो सोधिन्। अनि म कन्डम लगाएर स्वभाविकरुप पुरुषत्व देखाउने पौराणिक परम्परा अनुसार उनको माथि चढेँ तर उनको शरिर मोटो भएको र पेटपनि अलि भुक्क उठेको कारणले मेरो लाडोले उनको पुतिसम्म छुन सकेन तर मेरो मन आत्तिसकेको थियो। अनि मेरो कुरो बुझेर उसले आफ्नो दुईवटै खुट्टा उठाईदिईन अनि मलाई उनको पुति भित्र आफ्नो लाडो छिराउन सजिलो भयो तर एक दुई धक्कामा मै मेरो माल झर्‍यो किनकि निजसंग मेरो पहिलो समागम भएकोले म धेरै आत्तिएको थिएँ। त्यसपछि हामी मिठामिठा कुरागर्दै अरू डेढ दुई घन्टा वितायौं घडी हेरेको राती साँढे बार्‍ह बजेको रहेछ – एकपटक फेरी गर्छु है भन्दा अलि असहमति जनाउँदै थिईन अनि मैले मनमनै सोचे यो आईमाईको नखरा हो हुनपनि त्यस्तै रहेछ। उनको पुरै बस्त्र उदाङ्ग पारिदिएँ – कोठा भित्र अँध्यारो भएपनि बाहिरको लाईटले हल्का उज्यालो दिईरहेको थियो – जसको कारणले हाम्रो बसाई पूर्ण चिकुवा बातावरणमा थियो। मैले कन्डम लगाएर दोश्रो पटक उनीमाथी पहिलाको झै आरोहण गर्न शुरू गरें खुट्टा पहिल्यै उचालेर आफ्नो लाडो उनको पुति भित्र छिराएँ। यसपटक म अलि होसियार थिएँ। अनि विस्तारै विस्तारै धक्का मार्न थालेँ – तर १० मिनट भईसक्यो झर्ने छाँटकाँट छैन। यसर्थमा मैले आफूलाई सफल ठान्दै अरू जोडजोडले धक्का दिँदै थिएँ करिव १८-१९ मिनट पछि उनी आत्तियर अँ अँ अँ गर्दै कराईन मैले बुझेँ उनी पूर्ण सन्तुस्ट भईन। अनि त्यस्तै २५ मिनेटको वरीपरिमा मेरो फुसी झर्‍यो। एकदम मजा आयो। त्यसपछि हामी सुत्यौं।
भोलिपल्ट विहान हुने बेलामा (करिब पौने पाँच बजे) म उनले बोलाएको ब्यूँझे एसो हेरेको त मेरो दुध चुस्दै रहिछिन। फेरी एक पटक चिक्ने ईच्छा जाहेर गरि कन्डम लगाएर चिक्नकोलागि तयार भएँ। उनिपनि सहजरूपमा केहि नवोलिकन तयार भईन। यसपटक चिक्दा अझै स्वर्गीय आनन्द प्राप्‍त भयो। उनी नुहाउन गईन त्यसपछि आएर चिया पकाउन थालिन – त्यसपछि म नुहाउन गएँ आउँदा चिया तयार थियो। अघिल्लो दिन बेलुकाको सहमति अनुसार विहान कोही नउठदै म हिँडनु पर्ने थियो। हिँडन तयार भएँ उनले मलाई अलि पर सम्म छोडन जान्छु मर्निङ्ग वाक पनि हुन्छ भनिन। त्यसपछि हिडने बेलामा छोरीलाई "बाई" भन्छु भनेर छोरीको कोठामा छिरेको त छोरी अझै निदाईरहेकी रहिछिन। अनि फर्कने बेलामा मेरो आँखा छोरीको कोठाको ढोका छेउमा पर्न गयो ढोकामा बुढाबढीको फोटो झुन्डाएका रहेछन – मलाई मनमनै हाँसो उठ्यो – जो संग मैले रातभरि माया साटे उनको श्रीमान त मेरो साथी पो रहेछन।
तर केही छैन मैले दुःख गरेर पट्याएको केटी त्यसै छोडनेवाला थिईन। फोनमा कुरा हुँदै थियो अरूकाम हुन पाएको थिएन। तर दुई वर्षपछि फेरी सुखद संयोग पर्‍यो। उनी काठमान्डौंमा उनको श्रीमानको एउटा गै. स. स. मा काम गर्दाको अनुभवको पत्र लिन आउनु पर्ने भयो। अनि मसंग दुईरात विताउने बाचा गरिन। सोही बमोजिम उनलाई कलंकीबाट लिएर सुन्धाराको होटलमा दुईरात जिन्दगीको सम्पूर्ण मोजमस्ती गरेर जहाजको टिकट काटेर पठाईदिएँ। यसपटक भने उनले मेरो लाडो समेत चुसीदिई – सार्‍है आनन्द भयो।
तर आजकल उनी मबाट टाडा भएकी छिन किन हो फेसबुकपनि ब्लक गरिन अनि मोवाईल नम्बर पनि चेन्ज गरेकी छिन। उनको याद बेसरी आउँछ – उनलाई पनि मेरो याद आउला – कुनै समस्यामा परेर यसो भएको होला।
मिस्कलले बनाएको यौन जोडी, अन्तिममा रहेछ साथीको श्रीमती 2017-05-19T12:08:00+05:45 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Miracle Teen Team
Miracle Nepal - Multilingual Sex Story Website: मिस्कलले बनाएको यौन जोडी, अन्तिममा रहेछ साथीको श्रीमती